Jirid Af: marzo 2011
Maansoole: Ángel González
Maxaa dharaar caajisisan
oo ma doonto tagid
ka sii danbeeysaba xariiqda bidhaaman
ayaa soo jiidadta,
ayaa soo celsadta.
shinbiraha ayaa kula soo hareeriya
laamaha ugu sareeya,
neecawna ku lidsan
ayaa hawada dushayna kula haysa buska
dahabsan ee ilayskeeda.
Waxaa soo baxa dayaxa, dharaartuna waa soo jeeddaa.
Ilayska dahabka lehaa baa hadda leh qalin.
Qué perezoso dia
Daabacay Samantar Maxammad Saciid saacadda 13:45
Is goobiddayda, Maansay, adi baan kaaya iska goobay:
xidig firarsan ee biyo,
baa ku soo fatahday ahnaantayda.
Goobiddayda adi, Maansay,
waan is dhax-hafaday.
Kadib kaligaa baan goobi jiray
dar ka cararid naftayda:
aan ku dhaxdhumay!
Dibdanbese ee isdabamar badan
mar kale waan is arkay:
isla wajigii ku muquuran
isla biyihii ee muraayad
oo ah inaan ka cabin;
isla haraadkii u dhimasho.
Daabacay Samantar Maxammad Saciid saacadda 9:20
Fikir Habeen 夜思
Maansoole: Lǐ Bái 李白
Waa: 701 - 762
Sariir ka soo horjeeda if dayax cad.
Hamadayga mayaa daboola dhulka?
Waxaan kor u qaadaa madaxa oo fiiriyaa dayaxa cad,
hoos baan u dhigaa, waxaan ka fikiraa dalkayga dhaladka.
Daabacay Samantar Maxammad Saciid saacadda 9:32
Tilmaamo: Hànyǔ, Tarjumid dadban
Af Soomaali: Af Dad Waayay
Magacaygu waa af Soomaali. Da’dayda ma aqaan. Ha yeeshee in dhaaxa waan soo joogay. Tartan badan waan soo maray. Afaf gumeeyste ahaa waan ka guuleeystay. Waan jiray. Oo noolaa. Galad Eebe ha iga gaaree, intii uu Islaamku ku faafayay gayiga aan ku noolahay waxaan iska caabiyay in aan liico — dabargo’ warkiisaba daay. Kuwo aan dagaan ahaan iga fogayn iyo kuwo kaloo igula noolaa Afrika waxaa ka xoogbadtay afafkii qalaad ee gumeeysanayay. Anigu waxa aan gabaad ka dhigtay suugaan hodan ah oo aan leeyahay iyo af nolasha si dhameeystiran u cabbiri karo.
Rag shisheeye ah baa ii qiray inaan ahay afkii gabayaasha. Garab ayaan ahay. Aniguu i kaashadaa Soomaali walboo uu haleelay jacayl ugub ah, ama dhiilo qaran, ama daltabyo ba’ani, ama dareen dulmi-diidnimo. Waxaa kaloon ahay af hibo u leh oo ay iga soo burqadaan maanso murti iyo madaddaalo leh — ama mid Allebari iyo samadoon ah — lagana meeriyo oo looga damaashaado gole nabadeeyn, ama xaflad arooseed, ama fagaaro caleemosaarid, ama dabaaldag qaraneed. Ilaah wuxuu igu galadeeystay awood aan ku cabbiri karo dhacdo walba iyo abuur walba.
Waxaan ahay af Soomaali. Waan is hubaa. Xoolodhaqadtada waraabka shubaysa, beeraleyda la foorarta yaanbada, iyo kaluumeeystaha xeebta ka jilaabanayaba waxaan ku maaweeliyaa hees hawleed. Dhalaanka ooyayee daalan waxaan nasiino uga dhigaa hees caruureed. Ardayga looxjiidka ahee u ooman barashada afkiisa waan layliyaa oo aan garaadkiisa ku kobciyaa halxiraale iyo googaaleeysi. Waxaan ku xujeeystaa “Googaa!” Say yiraahdaan, “Cadalle!” Saan iraahdaa, “Haddaan hayay.” Say yiraahdaan, “Waa hadalka.” Si aan nafta u baro, waxaan ku googaaleeystaa Guntin macaan geed la fuul. Si aan wadnaha u baro, waxaan ku googaaleeystaa Duddun yaree daba baruur. Si aan afka iyo ilkaha ku taxan u baro, waxaan ku googaaleeystaa Idan yaroo alleellaale. Rag afkayga kaashanayaa ifka uga tagay waydiimo maandaalis ah. Indheergarad baa yiri: Lugo goranyo ma horaadkaa mise waa danbeedka? Abwaan kalaa yiri: Hadduu dabkii dhaxmoodo, maxaa lagu diiriyaa? Hadday dawo bukoodto, maxaa lagu dabiibaa? Hadduu dufan basaaso, xaggee dux looga doonaa? Sida la iigu kala badiyo af ahaan ayuu Soomaali walibana qaayihiisu la egyahay. Mid waa aftahan; mid waa afmaal; midna afmiishaar; ama afgarooc.
Cawo iyo ayaan waxaa ii ahaa maalintuu qarankii Soomaaliyeed si rasmi ah u askumay dhigaalkayga 1972, laguna sii xijiyay Olalihii Horumarinta Reer Miyiga. Waxaan yare dhaliilsanahay in la igu kaydiyo far qalaad oo Laatiin ah. Jaclaan lahaa in dhigaalkaygu uu naqdo farihii ay curiyayn maskaxmaal Soomaaliyeed sida fartii Gadabuursi, ama tii Cusmaaniya, ama tii Kadare. Cakuyee saboolnimo! Laatiinka looma iishayn haddii uu qarankii jiray awoodi lehaa sameeynta ama soo iibsashada madbacad faafiso mid ka mid ah far Soomaaligii ay curiyayn aqoonyahan Soomaaliyeed.
Waxay ahaadtaba, wixii intaa ka danbeeyay waan kobcay. Oo koray. Oo sii xidideeystay. Oo xoogeeystay. Oo xadaarad kaydsan yeeshay. Ma aan ogaynee, waxaa igu soo baxay tartan hoosaad. Kooxo ayaa igu soo baxay la yiraahdo tiibo talyaani iyo tiibo carabi. Af Ingiriisiguna kama xawaaro yarayn. Geed ayaa bari ku garamay “Godinay ima gooysayn haddaan barkay kugu jirin.” Rag Soomaaliyeed baa u soo tafaxaydtay luggooyadayda. Anigii oo nool ayaa afaf kale la igu milay. Waxaan lehaa Nagaad, markaasaa la igu baddalay Sabti. Waxaan lehaa Suni, markaasaa la igu baddalay Axad. Waxaan lehaa Sani, markaasaa la igu baddalay Isniin. Goodaar waxaa lagu baddalay Talaado; Goonyaadna Arbaco; Ugbaadna Khamiis; Hooyaadna Jimce.
In badan waan iska caabiyay. Qaran baa ii taagnaa. Aqoonyahan iyo suugaanyahan baa ii taagnaa. Hide iyo dhaqan jiray ayaan ku ilaashanaa. Nabad iyo Soomaali qabwayn ayaan higsanayay. Anigoo firfircoon — dhigaal ahaanna jirsaday 18 gu’ — balse wali u sii baahnaa turxaanbaxin, ayaa waxa igu dul dhacday waxay Soomaalida cusubi ugu yeeraan “qabta”.
Qarankii i kabayay ayaa burburay. Isla xiliyadaasna waxay Ilmo Aadan u xuub-siibtayn tiknoolijiyad dardartayd wadadta. Af ahaan waxaan la jaanqaadi waayay isbaddalkaas cusub ka dib markii calankii ii babanayay uu la itaalxumaaday daruur dhiig hoorinaysa iyo duufaano colaad oo kala firdhisay midnimadii walaalaha iyo maskaxmaalka Soomaaliyeed. Da’yartii gudaha ku jirtayna waxay galayn meerto madaw oo madhamaadto ah; kuwii dibadda u firxadayna waxay ku indhosarcaadayn kombiyuutarada iyo dagalada internetka ee kobcinaya afaf qalaad. Sidii ruux gablamay ayaan dhabanohays miciin biday. Waxaan isku sasabay rajo ma gablanto, Rabbina ma war la’a. Sideed iyo tobankii gu’ ee aan qornaa waxaa ii xigtay 20 gu’ oo dayac iyo darxumo ah. Waan shakiyay. Oo is canaantay. Oo aan is iri talow ma nabsi ayaa ku haysta sidii wiilkii aabihiis indhoolaha ahaa uga dhaqaaqay geedkii higlatible?
Waan dayacmay. Oo doorsoomay. Dhaxda ayaan ka baxay. Neef gowracan geed kama waabtee anigoo gagabaya ayaan waxa aan magan u naqday wadaadadii. Waxaan lehaa maadaama diintu u baahan tahay in la kala dhigdhigo af ahaan, dadkana lagu baro af Soomaali ahaan, wadaadada ayaa ku weeleeyn doono. Mise waa iiga sii darayn. Dugsiyo Islaami ah ayaa la furay. Anigoo af Soomaali ahna docadoceeyn baa laygu sameeyay af shisheeye sidiisii. “Maktabado” ayaa dal iyo dibadba laga dhakoolay. Oo aan aniguna marti ka naqday. Waxaan lehaa erayada baraarug, walaalo, gaal, iyo kuwo kale oo gooni u istaagi karo. Waxaa si doqan-ma-garadto ah hoosta la iiga soo gashay saxwo, ikhwaan, murtad, muqaawamo, iyo kuwo kale….
Hooyooyinkii iyo caruurtii waxaa guryaha loo soo dhoobay “nashiido” aysan af-aqoon. Halkii ay ahayd in cunug qurbaha joogo loo badbaadiyo afkiisa, loona tixgaliyo Soomaalinimadiisa, waxaa caruurta sanka laga galiyay cajalado ay ka soo yeerayaan Dhalacal shamsu calaynaa! Kaaga daranee wixii nabi-amaan ahee af-Soomaali ahaa waa loo “fatwooday”, oo la yiri waa “shirki” ama “khuraafaat” ama “makruuh”. Muslimiin Soomaaliyeed, una jidbeeysan Suubanaha, ayaa dadkooda u curiyay nabi amaan af Soomaali ah — kuna codeeyay:
Yaa qiyaasi karaya?
Qumanaw timihii baa
Dhagta loogu qiyaasay
Mar hadduu qosal maagona
Dhooluhuu yare qaadaa
Buu qariyoo ka cadaaday
Qof hadduu ka danbeeyo
Qalbiguu ka arkaa
Qoyaan buu naqon
Qaanac buu ka ahaa
Qof hadday is qabtaanna
Qawl xun ma oranaynin
Alle Qaadir ah mooyee
Ri’ waliba shilinkay is dhigtaa lagu qalaaye, aniga waxa i dabray, oo i dilooday, dabargo’na qarka ii saaray dadkii aan afka u ahaa. Af-Shisheeye ayaa la iga soo sokeeysiiyay; anigoo sokeeye ahina shishe la i marsiiyay. Badanaa dhalinyaro ku baratama, isuguna faana, maahmaahyada af Ingriiska. Waxay meelaha la taagan yahiin: “Look before you leap” balse kuma baraarugsana maahmaahdaas dhiggayd ee ah: “Intaadan falin ka fiirso.” Badanaa dhalinyaro ku doodaysa Let not the pot call the kettle black, balse moogan maahmaahdii ahayd Maroodi takarta saaran ma arkee midka kale tan saaran buu arkaa. Waxay u riyaaqaan You can take a horse to the river, but you can’t make it drink. Waxayse ka dhoohan yahiin Qoolley qoorqabasho biyo kuma cabto.
Maxaan ku haystaa dhalinyaro ku hanaqaaday qax iyo qaranjabkii bilawday 1991. Waxa badan aqoonyahan gaamuray. Da’ dhaxaad ah. Oo ka soo waraabay dhaqan iyo hide Soomaaliyeed oo saafi ah. Kuna soo dhax barbaaray oo wax ku bartay dalkii. Nasiibdaro, waxa uu ilbaxnimo iyo dadnimo biday inuu Soomaalida kale ugu garnaqsado af qalaad. Is tustus ama wahsi dhah, waxaa halhays u ah oraahyo qalaad sida “Catch-22” oo gabigaydaba soo ifbaxday 1961. Catch-22 waa halqabsi la xiriiro xaalad ruuxa ka dhigaysa mid uu mar walba guuldareeysto, oo sinnaba uma roona. Haddaba aqoonyahanka Soomaaliyeed ee heli karo halqabsi af Soomaali ah, ma hawl fududeeysi bay ka tahay in uu isticmaalo kuwa afka Ingiriisiga? Mise waa qabyari? Soo anigaba ma lehi halqabsi soo jirayn ah, oo qoto dheer: Haddii aan hadlo waa af sallax-ku-dhag; haddii aan aamusana ariga laaynta laga daayn mayo? Halqabsiganba wuxuu muujinayaa xaalad aan sinnaba ruuxa u roonayn — oo sida kaliya uu ku badbaadi karo ay tahay in uusan ruuxu galin xaaladdaas.
Da’ yartii iyo da’ dhaxaadkii waxa ku soo biiray fac sadexaad. Badanaa oday Soomaaliyeed dal iyo dibadba jooga oo afka iyo suugaantana u yaqaan si qoto dheer balse aan taa xushmad ku haysan labo dhacdo awgood. Kow, odaygii suugaanta iyo dhaqankiyo hidaha yaqaanay oo aan is moodin in uu wax yaqaano — kana haybeeysto rag afaf kale bariiskooda ku soo dhacsada. Labo, dhalinyartii oo aan aqoon u arag ruuxii ku xeeldheer hideha iyo dhaqanka, murtida, afka, iyo suugaanta Soomaaliyeed.
Barasho hortayd ha i nacin. Anigu waxa aan ku dulqotomaa suugaan iyo murti xeeldheer. Galad Eebe weeyaan in ay ii rumawday maahmaahdii ahayd Soomaalidu been way sheegtaa; beense ma maahmaahdo. Aristotle ayuu ahaa ninkii si cilmiyeeysan ugu dooday in markuu cunuggu dhasho ay maskaxda ilmo Aadan tahay tu maran (tabula rasa). Dhalashada ka dib, waxa ay maskaxda aqoon dhab ah ku heshaa dareemaha iyo wixii nolasha iyo noolaha ku hareersan ee uu ilmuhu goobjoog ka ahaado. Waxaa maahmaahyahayga ka mid ah Nimaan dhul marin dhaayo ma leh. Oo ruuxu wuxuu naqon qof aan lahayn waayo-aragnimo durugsan oo uu cashar ka qaadto. Sidoo kale af Soomaali ahaan faracayga Banaadiriga ahaa ku maahmaaho Cimrigaaga dheeraaday geel dhalaayaas ku tusaa.
Haddaba ilmihii la soo kulmo neef dhalaya, waxa uu helayaa waayo-aragnimo ku cusub. Waxa looxa maskaxdiisa ku qormaya erayo cusub oo mararka qaarkood wadta sawir la xiriira erayada. Meel neef ku dhalayo erayada uu cunuggu baran karo waxa ka mid ah fool, mandheer, nirig, wayl, waxar, nayl, iwm. Halkaas waxaa cunugga uga bilaabmaya cashar baayooloji ah — iyo lakab kaloo diini ah oo la xiriira jiritaanka Eebe wayneha abuuray uun kala duwan. Hadalkii Aristotle qaadadayaa, maahmaahyadaas qaadadayaa, dhamaanba waxa ay farta inoogu fiiqayaan hababka uu ruuxu ku dhiso garaadkiisa waxa ka mid ah isaga ama iyada oo la falgala ama la falgasha nolasha iyo abuurka Guulaha.
Bal eeg, horaan waxaan u iri labaadtan jir intuu geed ka booduu talo ka boodaa. Goor aan fogayn ayaa neuroscience (oo ah laan sayniska ka mid ah, qaabilsanna maskaxda iyo siday u shaqeeyso) waxa uu baaritaan ku ogaaday in maskaxda da’yartu aysan si fiican u xasilin ilaa intay gu’ ahaan ka gaarayaan 23 jir — gaar ahaan maskaxda qaybtayd la xiriirto gaarista go’aan iyo garashada ciribdanbeedka uu go’aankaasi leeyahay. Waa qaybta saynis ahaan loogu yeero frontal lobe. Jaclaan lahaayaa in aqoonyahanka ka dhashay Soomaalida, iguna hadla, ay il gooni ah u yeeshaan murtida xeeldheer ee ku kaydsan maahmaahyadayda.
Dhan kale aan bal idinka tusaaleeyo. Horaan ugu tiraabay murti oranaysay afar nin ayaa ku tartamay beenta: dhagoole, indhoole, cagoole, iyo qaawane:
Dhagoolihii waatuu yiri, “Sac baa seeri ka ciyay.”
Indhoolihii waatuu ugu cammiray, “Arkayoo giiran.”
Cagoolihii waatuu u dabadhigay, “War aan oradnoo jabino.”
Qaawanihii waatuu kaga qosliyay, “War armaa la ina furtaa?!”
Soomaaligii i garanaya uun baa garan xeeldheeridayda ee, ifka maanta waxa uu la olalayaa garwadayno xumaanta iyo beenta iyo nahaabnimada isku cammiro oo isugu riyaaqo, oo isku bogaadiyo. Hayeeshee Soomaalidii waxay murtidaan ka dhigayn mid ku kooban kaliya maad iyo qosal. Lama gaarsiin oo uma aysan dhaqangalin sidii murtidii ahayd la jiifiyaanna banaan la joojiyaanna banaan. Cidi ma lafogurin. Casharo fogna lagama soo dharaandharin. Waxay naqodtay uun wax laysku maaweeliyo oo looma aqoonsan in ay tahay murti xeeldheer oo la falgali karta aqoonta siyaasadda maanta iyo maamulka xun.
Magacaygu waa af Soomaali. Uma dhutiyo afgaroocnimo. Hodan ayaan ahay. Soomaaligii doono ha igu caasiyo, oo af qalaad ha iga doorto. Ninkii doono ha qaato erayga dilemma — dad baa ii jooga isticmaalaya dhiggiisa af Soomaali ahaan: lafta jacli, ludda jacli. Ninkii doono ha yiraahdo first thing first — dad baa ii jooga oranaya Oodo dhacameed siday u kala sareeyaan baa loo kala guraa ama Canjeero siday u kala koreeysaa loo kala qaadtaa. Ciddii doonto ha la soo shirtagto A bird in the hand is worth two in the bush — waxaa igu hadlo kuwo oranaya: miro geed saaran kuwa guntaada ku jiro looma daadiyo. Ciddii doonto ha ku wardiso Birds of the same feather flock together — kuwaa ku faana maahmaahda Shinbirba shinbirtayday la duushaa. Soomaaligii helaa filanayn farxad awgayd, hadduu doono qoraalkiisa cinwaan ha uga dhigo erayada manna from heaven — dad baa ii jooga iyagoo dhaqankooda ku faanaya ku halqabsanaya dhacdadii ninkii cag maroodi ka cabay. Soomaaligii doono ha ku wayraxo isticmaalka erayada Domino Effect — kuwo ayaa ii jooga qab iyo qaayo leh, oo soo halqabsanaya halaqmarayntii Cigaal Shiidaad.
Murtidayda waxaa ka mid ah: Run sheeg cid kuu maragfurto la waayimayo ee. Qoraagii Bangaaliga ee Bankim Chatterjee ee noolaa qarnigii 19-aad waatuu asiibay runta goortuu xusay in waayo-aragnimada dadka ifka ku nool ay isu eg tahay — jacayl, cabsi, abaar, colaad, hanqaltaag, hungurixumo, masayr, abaaldhac — hayeeshee waxaa kala duwan uun dhulalka iyo xiliyada ay dadku ku kala nool yahiin. Murtida oraahdiisa ku jirtaayi Muslimka kuma cusboo Qur’aankaa xusaya in rundiidka aad mooddo in ay isu dardaarmayn xaqdiidnimada. Sidaa awgayd, waxa aayaddaasi laga soo dharaandharin karaa in dadku ay leeyihiin sansaan habdhaqan oo isu eg haba kala fogaadaan dhul ahaan ama jiil ahaan.
Sakaraadba aan ahaadee, saansaantu ma xuma. Saxansaxo nolal ayaan ka dareemayaa dhankaa iyo Waqooyiga Soomaaliya. Guurti ayaa garawsadtay in xeer iyo kala danbeeyn la baadigoobo. Nabaddii ka dhaladtayna waxay iridaha u balaqday rugo waxbarasho ilaa heer jaamacadeed. Ujeeddaday ka leeyihiin yeelkeedee, waa galad Eebe in dhalinyaro is xilqaamay ay sameeystayn ururo suugaaneed, oo buugta suugaanta Soomaaliyeed faafiyo, faaqido, faa’iidana ka miirto. Alleelehee ifafaalo yar ayaa sidoo kale iiga soo bidhaamaysa qurbejoogta Soomaaliyeed oo qaab sugaaneed iyo hal-abuur ku wacyigaliya dadkooda. Taa waxay i galinaysaa yididiilo cusub. Mase waxa dalkii intiisa badan baadi naqodtay nabaddii ama garashadii i sii kobcin lehayd suugaan ahaan iyo dhigaal ahaanba. Ma aan dhiman, mana nooli. Waxaanse niyadda ku dhistaa in afaf kaleba ay nasiib u helayn rag boorka ka jafa, oo ilbaxnimo iyo u horseeday in uu afkoodu naqdo mid kaydiyo tagtada, timaaddana sahmiyo.
Wixii rag u kaco Rabbina u aqbalo waa rumawbaanee sooyaalka ayay ku taalaa sida ay afaf kaleba u soo noolaadayn ama u hanaqaadayn. Afka Cibriga waatuu qarniyo aasnaa, balse ay boorka ka jafayn aqoonyahano iyo siyaasiyiin gaarsiiyay heer uu Cibrigu naqdo mid si rasmi ah kaalin maalmeed ku leh dhamaan nolasha iyo waayo-aragnimada dadyowga Yahuudda. Sidoo kale dhankaa Hindiya dad baa u kacay in ay soo nooleeyaan af qarniyo aasnaa ee la yiraahdo Sanskrit oo waxay furayn rugo lagu dhigo oo lagu kobciyo afkaasi.
Bal aan is dul taago sida uu af Ingiriisku ku hanaqaaday oo uu ku naqday af aysan qoraxdu u dhacin. Ka hor intuusan af Ingiriisku ku faafin qaab gumeeystenimo, wuxuu ahaa af ku kooban kaliya cariga Ingiriiska. Wixii aqoon ee jirayna waxay ku kaydsanaayayn af Laatiinka. Casharada Jaamacadda Oxford waxay ku baxi jirayn af Laatiin. Ugu danbeeyntii rag Ingiriis ah baa ka fariistay, oo fekeray, oo ka fiirsaday, kana falanqooday baahida loo qabo afkooda hooyo. Si uu af Ingiriisigu uga sare maro af Laatiinka, tix iyo tiraab ayay raggaasi ku soo dagaalamayn. Oo dadaalayn. Oo dulqaadtayn. Nin walibana kaalin lixaad leh ayuu ka galay sooyaalka afkiisa hooyo ee Ingiriisiga. Shakespeare wuxuu ka mid ahaa halyayadii u kacay afkooda hooyo. Waa abwaankii af Ingiriiska kobciyay, ku dhiiraday in af Laatiinka laga maarmo, lana yimid hal-abuur baddalay baahidii loo qabay af Laatiinka.
Qarnigii 16-aad waatuu sidoo kale maamule dugsi oo Ingiriisi ah uu si digasho ah u yiri, “Waxaan jaclahay Rooma, kasii jaclahayse London. Waxaan doorbidaa Itaaliya, waxaanse ka sii doorbidaa Inglan. Waxaan ka daba dhacay oo qiimo u hayaa af Laatiinka, waxaanse si jidbeeysan uga sii daba dhacsanahay oo u sii qiimeeyaa af Ingiriisiga.” Kaligiis ma ahanee isla qarnigaasi waatuu gabyaa Ingiriisi ahi uu gabaygiisii Musophilis ku xusay in uu jaclaan lehaa in uu arko af Ingiriisiga oo faafa, wixii lagu kaydiyana af Ingiriisiga ay ka waraabaan bulshowaynta ku kala nool ifka dacaladiisa, iyo in af Ingiriisigu uu naqdo afka ay dadyaw kala jaad ahi si hufan ugu xiriiraan. Qarnigii 18-aad waatii wixii uu gabyaagaasi naawilayay ay wax ka soo caana-casaadayn ka dib markuu soo baxay John Wallis. Waa aqoonyahan ku faanay in afkiisa Ingiriisiga uu naqday af ay shisheeyuhu soo higsadaan, oo uu naqday af qoraal ahaan weeleeyay aqoonta iyo murtida ku baahsan ifka. Haddaba Soomaalidu ma garasho la’ee ma taloxumo ayaa badday inay i qiimeeyn waayaan af ahaan?
Hadda ka hor ayaa anigiyo af Kikuuyo xifaaltanay:
“Waxaan hodan ku ahay suugaanta iyo murtida,” ayaan ugu faanay.
“Labo maaddo awgood,” ayuu igu yiri af Kikuuyihii, “faan kuuma yaalo.”
“Saw maxay yahiin?” ayaan la soo booday.
“Waxaa lagaa helaa aqoonyahan ka faana af Soomaaliga, oo af Ingiriis ku faafiyo talooyinka dhaxalgalka u naqon lehaa Soomaalidiina. Aniga waxaa la iga helaa rag ifka caan ka ahaa, oo barafasooro ah, oo diiday in ay af Ingiriis wax ku qoraan… ma maqashay halyayga Kikuuyada ee Ngugi Wathango? Ma aqrisay qoraalkiisii ‘Decolonizing the Mind’?” Waxa uu oday Wathango ku nuuxnuuxsaday “in barista afafka shisheeye ee gumeeystuhu ay salka ku hayaan qorshe ah in ciddii la gumeeysanayay laga qabsado maskaxda, la bahdilo, lagana xayuubiyo kalsoonidii iyo lexjeclihii ay u qabtay afkayda hooyo ee xambaarsanaa dhaqanka iyo hideha. Waana ay hirgashay oo dad badan ayaa ka faanay in ay murtidooda ama waaya-aragnimadooda ku kaydiyaan afkoodii hooyo.”
“Qodabka labaadna bal hadda soo daay!” ayaan iri.
“Tiro-koob ahaan,” ayuu igu yiri af Kikuuyu, “waxaa kugu hadla dad aan sidaa u badnayn. Oo kaaga daranee qaarna ay Itoobiya gumeeysadto, qaarna ay Kiinya hoos tagaan. Kuwii ku noolaa dalkii Soomaaliyana waxa ay naqdayn kuwo ku dhax tabaaleeysan colaadda raagtay iyo madaafiicda ka dul dhacaya har iyo habeen; kuwo dibadaha u qaxay oo dhashoodii aysan ku garnaqsan karin af Soomaali; iyo kuwo dal iyo dibadba ka furay rugag ay ugu magacdarayn ‘madraso’ oo qandaraas ku haysta sidii uu af Carabiga u naqon lehaa af looga hadlo guryaha, ceelasha, kawaanada hilibka, maqaayadaha, rugaha qaranka… af si toos ah u hanto nolal maalmeedkiina oo aan cibaado ku ekayn. Dhanka kalena waxa gumaad ba’an kugu haya ururo shisheeye oo si samafal ah u furo rugo waxbarasho oo afkooda iyo afkaarahooda lagu hormariyo. Haddaba ii sheeg, af kafantiisii tolan tahay baad tahayee maxaad ku faantaa? Yaadse u faantaa? Soo adigakan sidii ruux gablamay ay diif iyo darxumo ku diloodayn? Hodantanimada aad xustay xaggay joogtaa?”
“Kafan?” ayaan iri, anigoo ay kalsooni iga muuqadto, “taa ha ka yaabin… ma dabargo’i dooni, waligayna jiri doonaa. Oo soo kabsan doonaa. Oo sii xidideeysan doonaa… Eebe idinkii. Aan ku hor maro qodabka ah Soomaalida kuma jiro ruux dhigaalka iyo hal-abuurka meel fiican ka gaaray oo misana diiday in uu af-shisheeye ku kaydiyo suugaantiisa. Horta ogaw caybtu ma ahan in af shisheeye wax lagu qori karo — halka ay arini ka qurantay waa in ruux Soomaali ah loogu garnaqsado ama wax loogu qoro af aan ahayn afkiisa hooyo oo sidaana la moodo ilbaxnimo iyo horumar. Dhanka kale, waa ay dhooban yahiin rag iyo dumar Soomaaliyeed oo iyagoo afaf shisheeye wax ku curin karo misana doortay afkooda Soomaaliyeed. Alleelehe sababta aysan qorayaashaasi dadkooda uga dhax muuqan u badi in ay tahay Soomaalida oo ilbaxnimo iyo horumar mooday kaliya in afqalaad wax lagu xariiqo — oo wixii af Soomaali ku qoranna ay tayo hooseeyaan fikrad iyo farshaxan ahaanba. Waana mid ka mid ah dabinadii gumeeystaha ee ahayd in uu ruuxu ku kalsoonaan waayo afkiisa hooyo. Qodabka ah dad tiro yar baa igu hadlo, tiro yaridayda waligay lama dhutin waayo dad tayo iyo garasho lagu galadeeystay baa igu hadlo. Ogawna sida aan u tabar xumahay uma rajo xumi.”
“Af Soomaaliyaw,” ayuu igu yiri af Kikuuyihii, “ha inkirin in ay jirayn afaf kale oo kula dhashay oo geeska Afrika looga hadli jiray. Maantana xaggee ku danbeeyayn? Ama waa kuwo gabaabsi ah amaba waa dabargo’ayn oo cid ku hadasho ifka ma saarna. Haddii aad af Soomaali tahayse, yaa kuu dammaanad qaaday inaadan dabargo’i doonin?”
Haddii aan af Soomaali ahay, waxa dhabanohays igu ridday waydiintaas. Rugihii dhaqankiyo hidaha ee aan ku ilaashanaa waxa harqiyay colaado iyo abaaro isdaba joogo. Aqoonyahankii iyo qurbejoogtii Soomaaliyeed ee wax baradtay waxay u iishayn inay afqalaad ku gudbiyaan taladooda iyo waayo-aragnimadooda. Qarankii i ururin lehaa, i kabi lehaa, i kobcin lehaa, i kaydin lehaana ha sheegin. Yaan u garnaqsadaa? Yaanse ka garnaqsadaa? Waligay isma oran waxa laguugu soo halqabanayaa maahmaahdii ahayd Cidina uma maqna; ceelna uma qodna.
W.Q.: Cabdullaahi Janno (writersomali@gmail.com)
Ka: Mogadishu Times
Daabacay Samantar Maxammad Saciid saacadda 10:06
Tilmaamo: Maqaalo Soomaaliyeed